Nankalaza ny Faha-100 Taonany ny Vavolombelon’i Jehovah any Slovakia
BRATISLAVA, any Slovakia—Nanao fandaharana ny Vavolombelon’i Jehovah any Slovakia mba hanasana ny olona hitsidika ny biraon’ny sampan’izy ireo, tamin’ny 15 Desambra 2012. Nankalaza ny faha-100 taonan’ny fampianarana Baiboly ataony izy ireo. Nizarana fanasana ny olona teny amin’ny manodidina mba hitsidihan’izy ireo an’ilay toerana, ary olona 200 mahery no tonga. Nisy tabilao folo naranty tao mba hampisehoana ny zava-nisongadina teo amin’ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah any Slovakia.
Tamin’ny 1912 no nanomboka nampianatra Baiboly tany Slovakia ny solontenan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Namoaka Baiboly amin’ny teny slovaky ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1991, ary marina tsara sy mora vakina ilay izy. Mizara ho ekipa dimy ny mpandika teny any Bratislava, ary ny biraon’ny sampana any no mikarakara azy ireo. Anisan’ny adika ao ny tenin’ny tanana slovaky sy fitenim-paritra rôma. Maimaim-poana daholo ny boky sy Baiboly avoakan’ny Vavolombelona. Misy 11 000 mahery izao ny Vavolombelona any Slovakia ary olona 3 400 mahery no ampianariny Baiboly maimaim-poana isan-kerinandro. Fianakaviana sy olona avy amin’ny sokajin-taona samihafa no ampian’izy ireo mba ho sambatra.
Misy fiangonana 160 any Slovakia ary manao fivoriana fianarana Baiboly maimaim-poana izy ireo. Afaka manatrika azy ireny koa izay te hanatrika. Efa hatramin’ny 1923 ny Vavolombelona no nanao fivoriamben’ny vondrom-paritra isan-taona. Nasiana fivoriamben’ny vondrom-paritra manokana tany Bratislava tamin’ny 2006 ka 10 700 mahery ny mpanatrika, anisan’izany ireo solontena 3 600 mahery avy tany amin’ny Repoblika Tseky sy avy tany Hongria ary Romania.
Nilaza i Rastislav Eliaš, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Slovakia, hoe: “Malaza ho tia fihavanana sy manao ny marina ny Vavolombelon’i Jehovah eto Slovakia nandritra izay 100 taona mahery izay, sady mahay mifandray tsara amin’ny havany sy ny mpiara-monina aminy. Hiezaka foana izahay hanampy ny olona hampihatra izay ianarany ao amin’ny Baiboly toy ny efa ataonay ka handray soa amin’izany.”